MPU - Myanmar Payment Union
Search ... မူလစာမျက်နှာကုမ္ပဏီအကြောင်းAnnual Report၀န်ဆောင်မှုများATMPOSမှတ်ပုံတင်ပြီးသော POS Brand များE-Commerceအွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ရန်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသတင်း နှင့် အချက်အလက်များလှုပ်ရှားမှုများဆုချီးမြှင့်ခြင်း နှင့် POS အသုံးပြုပုံ သင်တန်းပေးခြင်းအကျိုးတူလုပ်ငန်းရှင်များလျှောက်ထားရန်POS စက်တပ်ဆင်လိုသူများအတွက်MPU Payment Gateway ဖြင့် ချိတ်လိုသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အမေးအဖြေကဏ္ဍဆက်သွယ်ရန်
Telenor Myanmar Selfcare mobile application တွင် Mobile Topup ၀ယ်ယူခြင်းများကို MPU ကဒ်ဖြင့် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်တွင်စတင် ပေးချေ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မည်သည့် ATM တွင်မဆို MPU အဖွဲ့၀င် ဘဏ်များမှ ထုတ်သော MPU Card များဖြင့်၄င်း၊ JCB, UPI ကဲ့သို့ သော နိုင်ငံတကာကတ် များဖြင့်၄င်း ငွေသားထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲနိုင်သည့် ပမာဏမှာ MPU ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ATM တွင် ၁ရက်လျှင် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ထောင်မှ အများဆုံး ကျပ်ဆယ်သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
Read more Point of Sale(POS)
MPU Logo ရှိသော MPU အဖွဲ့၀င်ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Merchant များ(ဆိုင်များ) တွင် MPU အဖွဲ့၀င်ဘဏ် များမှထုတ်သော MPU Card များဖြင့်၄င်း၊ JCB, UPI ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာကတ်များ ဖြင့်၄င်း ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Read more News & Events 24 July 2017
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဘဏ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ အဖွဲ့၀င်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
(၃) ကြိမ်မြောက် MPU မိသားစု၏သင်္ကြန်နှစ်သစ်အကြို စတုဒီသာအလှူ
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် MPU အဖွဲ့၀င် ဘဏ်များမှ MPU Credit Card ၀န်ဆောင်မှုကို ပြည်သူများသို့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီး ဌာနမှ အခွန် ငွေများကို MPU e-commerce မှတဆင့် MPU Card များအသုံးပြုပြီး ပေးချေနိုင် ပြီဖြစ်ပါသည်။
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar.Copyright © 2017 myanmarpaymentunion.com. All Rights Reserved. မူလစာမျက်နှာကုမ္ပဏီအကြောင်းAnnual Report၀န်ဆောင်မှုများATMPOSမှတ်ပုံတင်ပြီးသော POS Brand များE-Commerceအွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ရန်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသတင်း နှင့် အချက်အလက်များလှုပ်ရှားမှုများဆုချီးမြှင့်ခြင်း နှင့် POS အသုံးပြုပုံ သင်တန်းပေးခြင်းအကျိုးတူလုပ်ငန်းရှင်များလျှောက်ထားရန်POS စက်တပ်ဆင်လိုသူများအတွက်MPU Payment Gateway ဖြင့် ချိတ်လိုသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အမေးအဖြေကဏ္ဍဆက်သွယ်ရန်